Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Midowga Yurub wuxuu mamnuucay dadka socotada ah ee Mareykanka ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Midowga Yurub inuu dib u soo celiyo xayiraadihii safarka ee dadka Mareykanka
Midowga Yurub wuxuu Mareykanka ka saaraa liiska safarka-nabdoon sabab la xiriirta kororka kiisaska cusub ee COVID-19.
Midowga Yurub wuxuu joojinayaa dhammaan safarada aan muhiimka ahayn ee booqdayaasha Mareykanka.
Midowga Yurub wuxuu dib u soo celinayaa xannibaadihii safarka sababo la xiriira qalliinka Mareykanka ee COVID-19.
Dalxiisayaasha Midowga Yurub ayaa weli laga mamnuucay inay soo galaan Mareykanka.
Saraakiisha Midowga Yurub waxay ku taliyeen in la joojiyo dhammaan safarada aan muhiimka ahayn ee ka imanaya Mareykanka maadaama tirooyinka cusub ee COVID-19 ee Mareykanka ay sii kordhayaan.
Guddoomiyaha Komishanka Yurub Ursula von der Leyen
The Midowga Yurub waxay kula talisay waddammada xubnaha ka ah inay ka saarto Mareykanka, Israel, Lubnaan, Montenegro iyo Waqooyiga Macedonia liiska waddamada nabdoon ee safarka aan muhiimka ahayn, sababtuna tahay tirada sii kordheysa ee cudurada cusub ee coronavirus ee dalalkaas.
Ku dhawaaqista maanta ee Golaha Yurub waxay u dhigantaa talo ku socota 27 -ka dal ee ku bahoobay ururka, kuwaas oo farsamo ahaan u haysta madaxbanaanida xuduudahooda. Waxay beddeshaa talo -bixintii Juun si loo fududeeyo xayiraadaha saaran socdaalayaasha Mareykanka.
Talo soo jeedintu waa mid aan xad lahayn, taasoo la micno ah in dalal shaqsiyeed loo oggolaan doono inay go'aansadaan haddii ay weli rabaan inay u oggolaadaan booqdayaasha Mareykanka caddaynta tallaalka, tijaabooyinka taban, ama karantiilnimada.
EC wuxuu cusbooneysiiyaa talooyinkiisa safarka labadii toddobaadba mar, oo ku saleysan heerarka caabuqa COVID-19. In la tixgeliyo “Aamin ah” waddan wuxuu u baahan yahay inuusan ka badnayn 75 xaaladood oo cusub 100,000 oo qof oo deggan 14-maalmood gudahood.
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay, Mareykanka ayaa celcelis ahaan 152,000 kiis oo cusub COVID-19 maalin kasta usbuucii la soo dhaafay, oo la siman tirooyinka laga soo bilaabo dabayaaqadii Janaayo.
Qaliinkii ugu dambeeyay wuxuu cidhiidhi gelinayaa isbitaallada iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Qiyaastii mid ka mid ah shantii unug ee daryeelka degdegga ah ayaa gaaray ugu yaraan 95% awood.
Heerarka dhimashada ayaa iyana kor u kacay - oo gaaray celcelis ahaan in ka badan 1,000 maalintii. In ka badan kala bar dhammaan dadka Mareykanka ayaa si buuxda looga tallaalay COVID-19. Dadka aan la tallaalin waxay qiyaastii 29 jeer u badan tahay in la seexiyo isbitaalka COVID-19 marka loo eego kuwa si buuxda loo tallaalay.
Dhanka kale, dalxiisayaasha ka EU - iyo inta badan adduunka intiisa kale - ayaa weli laga mamnuucay inay soo galaan Mareykanka iyada oo la raacayo xayiraadaha la soo rogay horaantii masiibada.
Horraantii Ogosto, maamulka Biden ayaa lagu xamanayey inuu ka fiirsanayo shuruudaha tallaalka si dib loogu furo xuduudaha, laakiin waxba lagama maqlin soo jeedinta tan iyo markaas.
Horaantii bishaan, Madaxweynaha Komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in isdhaafsanaan la'aanta aan la oggolaan doonin inay "soo jiitamto toddobaadyo".